माथिल्लो तामाकोशीको लागत दोब्बरपुग्यो, यस्तो छ कारण
आयोजना शुरु गर्दा ३५ अर्ब लागत रहेको सो आयोजनाको कूल लागत वृद्धि भई ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने भएको छ । त्यसमा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने भएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ब्याजमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कूल लागतमा समेत प्रभाव परेको हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आगामी ११ असारमा हुने ११ औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५को प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनको लागत ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
प्रक्षेपित लागत हालको परिस्थितिसँग मिल्ने गरी यथार्थपरक रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा आयोजनाको लागत अझै बढ्ने देखिएको छ । शुरुमा आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३-७४ भित्र सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो ।
विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पन एवं बाढीपहिरोले पु-याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६५-६६मा निर्माण अवधि छ वर्ष हुने अनुमान गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड तय गरिएको थियो । कम्पनीले निर्माण ढिलाइ भएपछि गत चैतमा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।
यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य बृद्धिका कारण आयोजनलाई १२ अर्ब थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको हो । विसं २०७४ को चैतमा लागत अनुमान संशोधन गर्दा विदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धिलाई २०७४ को मङ्सिरसम्म भएको खर्चलाई यथार्थ सटही दरको आधारमा र त्यसपछिका बाँकी अवधिलाई प्रति अमेरिकी डलरलाई १०२ का दरले हिसाब गरिएको थियो तर, विदेशी मद्राको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भई प्रतिडलर ११० भन्दा माथि गएकाले संशोधित लागत अनुमान अपुग हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै ऋण सम्झौता हुँदा ब्याजदर ११ प्रतिशत रहने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार आव २०६८-६९ देखि २०७४-७५ सम्मको ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ब्याजलाई प्रत्येक तीन महीनामा पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले प्राधिकरणमार्फत् प्रदान गरेको ऋणमा प्राधिकरणको जोखिम प्रिमियमसहित स्थिर रुपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । गत असारसम्म १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख ब्याज पूँजीकरण गरिएको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार आगामी चैतभित्र निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकाले सोही अवधिसम्मको ब्याज पूँजीकरण २१ अर्ब ७४ करोड हुने अनुमान छ ।
ऋण प्रदायक संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको २०७५-७६को लागि ब्याजदर घटाई ११ प्रतिशत काम गरेका छन् । नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर घटाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनामा सरकारले ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु छ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले दुई-दुई अर्ब गरी कूल ३१ अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेका छन् ।
कूल १० अर्ब ५९ करोड रकम स्वपूँजीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानीकोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई-दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ ।
आयोजनाले चरिकोट दोलखा–सिङ्गटी ३५ किलोमिटर सडकमा एक अर्ब खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो । आयोजनाले सिङ्गटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल बनाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्....
सावधान ! तपाइँको फेसबुक अरुले त चलाईरहेको छैन ? यसरी थाहा पाउनुस्
सुनको तोलामा ६३ हजारमा कारोबार
इजिप्टका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी उच्च रक्तचाप र मधुमेहलगायत रोगबाट पीडित थिए । ६७ वर्षीय मोर्स...
नवलपरासीमा बसको ठक्करबाट दुर्घटनामा एकको मृत्यु, अर्का १ गम्भीर घाइते
सुनसरीको धरानबाट एक महिनाअघि सुरु भएको डेंगुबाट ५ सय ७६ जना बिरामी भइसकेका छन् । डेंगु ...
गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने, होला त स्थगन ?
विवादित गुठी विधेयक, लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलगायत विषयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बो...
राप्रपा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक असार ६ र ७ गते हुने